Yiziphi izindlela zokwakha ama-backlink fast?
Ukuhlanganisa isixhumanisi kuyisici esiyinhloko nesinselele kakhulu ekuthuthukiseni injini yokusesha. Ithinta isikhundla se-website simo futhi idala ukubuka kwe-Google mayelana nesizinda esithile. Indima yezixhumanisi ezingenayo ku-SEO iye yaboniswa enombolweni yezibalo zokucwaninga.
Noma kunjalo, abanye abakwa-webmasters namanje banokungabaza mayelana nomthelela kanye nezinzuzo zezixhumanisi ezingenayo. Bathi ukuthembela kwe-Google kuma-backlink kunciphisa. Noma kunjalo, ngithanda ukuthatha phezulu lapho. Ama-backlink awakwazi ukunyamalala noma kunini lapho edlala indima ebalulekile ku-algorithm ye-Google yesigaba. Ucwaningo lwamuva lubonisa ukuthi inani lezizinda ezixhumanisa nekhasi lihambisana nezikhundla ezingaphezu kwanoma yiziphi ezinye izici. Uma ungayithathi ngokungathí sina le datha, zama ukucwaninga ngokwakho. Faka igama lakho elingukhiye elibhekiswe ku-Semalt Web Analyzer bese ubheka amakhasi aphezulu asezingeni. Zonke zinenqwaba yezixhumanisi ezingenayo. Ngisho noma igama elingukhiye elihlosiwe akuyona ukuncintisana kakhulu, amawebhusayithi we-TOP asezingeni eliphezulu azoba nezixhumanisi eziningi ezingenayo.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngendlela yokwakha i-backlink ngokushesha futhi ephumelelayo. Sisebenzise ezinye zalezi zindlela zokwakha izixhumanisi ukuze sikhulise isikhundla sekhasimende lethu lewebhusayithi. Sithole imiphumela emihle futhi sakhula amaphrofayela esixhumanisi amaklayenti ethu.
Ngakho-ke, masiqhubeke! Ithemba lolu lwazi luzokwenza ukuthi uthole ijusi yokuxhumanisa kwekhwalithi kusayithi lakho.
Amasu asebenzayo okwakhiwa kabusha okusheshayo nangempumelelo
Yakha iziteshi zokuxhumanisa nezinjini zokusesha
ukubusa, amawebhusayithi axhumene nawe esikhathini esidlule angase akwenze lokhu futhi. Benza ngoba sebevele bengabalandeli balokho okwenzayo nokubhala. Kungenzeka ukuthi bazoba nesithakazelo kunoma yikuphi okuqukethwe okusha okushicilelayo nokuxhumanisa kuso. Isithombe sokuthi une-database yonke imithombo ye-web eseyivele ixhunywe nawe, ngakho-ke, kungenzeka ukuthi inesithakazelo kokuqukethwe kwakho okusha. Akungabazeki ukuthi kuyoba namandla okudambisa ebhizinisini lakho le-inthanethi njengoba ungathola ukugeleza okuqhubekayo kwethrafikhi engenayo kusayithi lakho.
Ungakha i-database enjalo usebenzisa i-CSE ye-Google. Konke okudingayo ukulandela lezi zinyathelo:
Thola imithombo yewebhu esevele ixhuma kuwe;
Ukulayisha le mithombo ibe injini yokusesha yangokwezifiso;
Thola amathuba okuxhumanisa okuqukethwe okuzayo.
Bhalisela ku-Google CSE ithuluzi bese udala injini yokusesha lapho. Bese ufaka iwebhusayithi oyifunayo kanye negama lenjini yakho yokusesha yangokwezifiso. Zulalela kuthebhu elilandelayo bese ubona inani eliselikanini le-A1. Kufanele ifomethiwe njenge "domain. i-com. "Udinga ukukopisha unamathisele le datha" kumasayithi okusesha "kusizinda sakho sokusesha esijwayelekile. Futhi ekugcineni, chofoza inkinobho "yakha".
Nokho, uma ungathanda ukusesha izizinda eziningi kusuka kuphrofayela yakho ye-backlink, udinga ukwengeza isizinda esiphezulu onakho. Yingakho udinga ukuchofoza inkinobho ethi "hlela ukusesha injini" bese wengeza amasayithi amaningi. Ungakhetha ukhetho "ukwengeza amasayithi ngobuningi" futhi ukopishe uhlu lwamakheli ebhokisini. Khetha umsebenzi "faka wonke amakhasi kulawa masayithi" bese uchofoze "londoloza. "
Manje, injini yakho yokusesha isilungile. Ungayisebenzisa ukuze useshe amathemba wokwakha isixhumanisi noma kunini lapho ushicilela ucezu olusha lokuqukethwe.
Le ndlela yokwakha isixhumanisi ingaba esebenzayo uma iphrofayli yakho yokuxhumanisa ikhula ngoba unedatha enkulu kakhulu yemithombo yewebhu ukusesha yonkana Source .